Fat 32 to NTFS ! — Hein Htet Kyaw
Install zsh and Themes [Project X Related]
Contact Form တစ်ခု Setup လုပ်နည်း
Contact Form7မှာ2Column ထားတဲ့နည်း
မေ 13, 2018
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 24, 2018
နိုဝင်ဘာ 13, 2017
By Hein Htet Kyaw မေ 13, 2018 1 Min Read
ရှာလေတွေ့လေပေါ့လေ :3 စောစောကတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား အခုတော့ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ။ ၂ ခါမောရအုံးမယ် xD !! Linux သုံးပြီးတော့ HDD ကို External HDD အဖြစ် Data Backup လောက်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်လေဆိုပြီးတော့ Data တွေ သိမ်းထားခဲ့တယ်ပေါ့လေ … အစပိုင်းမှာတော့ တိုင်မပတ်ဘူး :3 ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့မှာပဲ ကသစ်က Blu-ray Movie တွေရှိတယ် ယူမလားဆိုပြီးပြောတော့ ယူမယ်ဆိုပြီး အားရပါးရသွားလိုက်ကောပေါ့လေ :3 Copy ကူးမယ်လဲလုပ်ကော၊ ။ FAT 32 ဖြစ်နေတော့4GB Or Large File တွေ ကူးမရဘူးဖြစ်နေတယ် OMG !!! Fat 32 ဟာ Linux တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် … Window လိုမျိုးနေရာပဲဖြစ်ဖြစ် File Storage အဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ တိုင်ပတ်တော့တာပေါ့လေ။ NTFS အကြောင်းနဲ့ FAT 32 အကြောင်းကိုတော့ Wikipedia မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လေ !!
File တွေကို တစ်နေရာမှာ ကူးပြီးတော့ ပြန်သွင်းရမှာဆိုတော့ အချိန်တွေကုန်မယ် စက်လဲ ပင်ပန်းတယ်ပေါ့လေ !! ဒါနဲ့ပဲ Google မှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ convert နဲ့ လွယ်လင့်တကူပြောင်းလို့ရတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ပြန်လုပ်ကြည့်တော့လဲ အတော်လေးကိုအဆင်ပြေတာဆိုတော့ကာ … နည်းနည်းလောက်တော့ Sharing လုပ်မယ် အဲမှားလို့ Note တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းလိုက်မယ်ပေါ့လေ …
အရင်ဦးဆုံး Window Command Prompt ကိုခေါ်ကြတာပေါ့။ Window Key + X ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ Window Start Menu လေးပေါ်ကို Right Click နှိပ်သလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲမှာ Command Prompt (Admin) ကိုရွေးလိုက်ပါ။ Window User Account ရဲ့ Allow ပေးဖို့ Box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။ ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ … ပြောင်းလဲချင်တဲ့ HDD volume. volume – D:/E:/I:/J: ကိုမှတ်ထားရမယ် Label ကိုမှတ်ထားရပါ့မယ် ! မှတ်ထားပြီးရင်တော့
ကိုရိုက်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ volume က I: ဖြစ်လို့ I: လို့ ညွှန်းလိုက်တာပါ။ အကယ်လို့သာ D: ကိုပြောင်းချင်ရင်တော့ D: ကိုရိုက်ပေါ့။ /fs:ntfs ကတော့ Fat ကနေ NTFS ကိုပြောင်းလဲပါ့မယ်လို့ပြောတာပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ နားလည်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့လေ !!! အဲဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ Label Name ကိုတောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က HDD ဖြစ်တဲ့အတွက် HDD လို့ရိုက်လိုက်တာပေါ့လေ အကယ်၍သာ HDD မဟုတ်ပဲ Local Disk ဆိုရင် Local Disk လို့ရိုက်ပြီး Data ဆိုရင် Data လို့ရိုက်ရပါမယ်။ ၃ ၄ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးသွားရင်တော့ Successfully Convert ဆိုတာလေး ပေါ်လာရင်တော့ ဘာလိုသေးလို့လဲဗျာ။ ==D Window Explorer ကနေပြီးတော့ Converted HDD ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ NTFS ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။
ဒီနည်းကတော့ Without Lose Any Data နည်းပေါ့လေ။
အကယ်၍များ ဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူး Data တွေ Lose လဲ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်တော့
Window Explorer ကနေပြီး Volume ကို Right Click လုပ်ပြီး Format ကိုရွေးလိုက်ပါ။ Format Label (Volume:) ဆိုတဲ့ Window Box လေး ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ File System ကို NTFS(Default) ကိုရွေးပြီး Start ကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ Data တွေလဲပြောင် NTFS ကိုလဲရပါပြီ။ ဒီနည်းကိုတော့ Suggest မပေးတာကတော့ Data တွေက 500 GB လောက် ရှိမယ်ဆိုရင် အတော်အချိန်ကုန်တဲ့ နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံး နည်းလမ်းလေးကိုပဲ Suggest လုပ်ပါတယ်။ !!
Author Hein Htet Kyaw
I'm Hein Htet Kyaw, most people call and know me as Kiddo Monster. The name I created it wasareason for purpose to do some underground things, most people called that as Hacking. As for me Hacking is just painting and became art for me. Sharing is caring and I help lot of people as much as I can. Currently I work at Myanmar Exited Group Company Limited with Manager Role for Manage people within Digital Marketing Trends and Sub role of Megshop.com.mm!
မတ် 9, 2020
© 2020 Hein Htet Kyaw.